Farqiga u dhexeeya gownnada go'doominta ee la tuuri karo, goonnada ilaalinta iyo dharka qalliinka - News - Baili Medical Supplies (Xiamen) Co., Ltd.
Farqiga u dhexeeya goonnada go'doominta ee la tuuri karo, gooyada ilaalinta iyo dharka qalliinka
Gownnada go'doominta ee la tuuri karo, goonnada ilaalinta la tuuri karo, iyo gooyada qalliinka ee la tuuri karo waa dhammaan qalabka ilaalinta shakhsi ahaaneed ee sida caadiga ah loo isticmaalo isbitaallada. Laakiin habka kormeerka bukaan-socodka, waxaan inta badan aragnaa in shaqaalaha caafimaadku ay waxoogaa ku wareersan yihiin saddexdan. Xogta ka dib marka uu tifaftiruhu wax ka weydiiyo xogta waxa uu kaala hadli doonaa waxyaabaha ay saddexdaas iskaga mid yihiin iyo waxa ay kaga duwan yihiin arrimahan soo socda.
Dharka go'doominta ee la tuuri karo: qalabka ilaalinta ee loo isticmaalo shaqaalaha caafimaadka si looga fogaado wasakhowga dhiigga, dareeraha jidhka, iyo walxaha kale ee faafa marka la taabto, ama si looga ilaaliyo bukaanka caabuqa. Gown-ka go'doominta waa go'doomin laba-gees ah si looga ilaaliyo shaqaalaha caafimaadka inay qaadaan ama sumoobaan iyo in bukaanku qaado.
Dharka ilaalinta la tuuri karo: qalabka ilaalinta ee la tuuri karo ee ay xidhaan shaqaalaha caafimaadka marka ay la kulmaan bukaanada qaba Heerka A ama cudurada faafa ee ay maamulaan cudurada faafa ee Class A. Dharka ilaalintu waa ka hortagga caabuqa shaqaalaha caafimaadka waana shay keli ah oo go'doon ah.
Dharka qalliinka ee la tuuri karo: Gown-ka qalliinku waxa uu ciyaara door difaac oo laba dhinac ah inta lagu jiro hawlgalka. Marka hore, goonnada qalitaanku waxay abuurtaa xannibaad u dhexeeya bukaanka iyo shaqaalaha caafimaadka, taasoo yaraynaysa suurtogalnimada in shaqaalaha caafimaadku ay la kulmaan dhiigga bukaanka ama dheecaannada kale ee jidhka iyo ilaha kale ee suurtagalka ah ee caabuqa inta lagu jiro qaliinka; Marka labaad, goonnada qalitaanku waxay xannibi kartaa gumeysiga/ku-dhejinta maqaarka ama dharka shaqaalaha caafimaadka Bakteeriya kala duwan oo dusha sare ah ayaa ku faafta bukaannada qalliinka, iyagoo si wax ku ool ah uga fogaanaya isku-tallaabta bakteeriyada u adkeysata daawooyinka badan sida Staphylococcus aureus (MRSA) iyo enterococcus vancomycin u adkaysta (VRE). Sidaa darteed, shaqada xannibaadda ee goonnada qalliinka ayaa loo arkaa fure u ah dhimista khatarta caabuqa inta lagu jiro qalliinka .
2. Tilmaamaha labiska
Gown gooni-gooni ah oo la tuuri karo: 1. Markaad la xiriirto bukaannada qaba cudurrada faafa ee lagu faafiyo taabashada, sida kuwa ay qaaddo bakteeriyada u adkaysata daawooyinka badan. 2. Marka la fulinayo go'doominta ilaalinta ee bukaannada, sida ogaanshaha, daaweynta iyo kalkaalinta bukaanka qaba gubasho ballaaran iyo bukaannada lafaha. 3. Waxaa laga yaabaa inay ku rusheeyaan dhiigga bukaanka, dareeraha jidhka, dheecaanka iyo saxarada. 4. In la galo waaxaha muhiimka ah sida ICU, NICU, iyo waadhadhka ilaalinta, in la xidho gowns gooni-gooni ah iyo in kale waa in lagu go'aansadaa iyadoo loo eegayo ujeedada gelitaanka iyo heerka xidhiidhka shaqaalaha caafimaadka.
Dharka ilaalinta ee la tuuri karo: 1. Markaad la xiriirto bukaanada qaba Class A ama Class A cudurada faafa. 2. Markaad la xiriirto bukaanada looga shakisan yahay ama la xaqiijiyay SARS, Ebola, MERS, H7N9 hargabka avian, iwm, waa in la raaco habraacyadii ugu dambeeyay ee xakameynta caabuqa.
Dharka qalliinka ee la tuuri karo: Si adag ayaa loo nadiifiyaa waxaana loo isticmaalaa daawaynta qalliinka ee bukaannada qolka qalliinka ee gaarka ah.
3. muuqaalka iyo shuruudaha alaabta
Dharka go'doominta ee la tuuri karo: Dharka go'doominta ee la tuuri karo waxaa badanaa laga sameeyaa walxo aan tolmo lahayn, ama lagu daro walxo leh naafo ka wanaagsan, sida filim caag ah. Iyada oo la adeegsanayo tignoolajiyada isku xidhka fiber-ka ee kala duwan halkii laga isticmaali lahaa isku-xidhka joomatari ee alaabada tolmada iyo tolmada leh, waxay leedahay daacadnimo iyo adayg. Dharka go'doonku waa inuu awood u yeesho inuu daboolo jidhkiisa iyo dhammaan dharka si uu u sameeyo xannibaad jireed oo ku saabsan gudbinta noolaha iyo walxaha kale. Waa inay lahaataa impermeability, caabbinta naaxinta iyo iska caabinta ilmada . Waqtigan xaadirka ah, ma jiro halbeeg gaar ah oo Shiinaha ah. Waxa jira hordhac kooban oo kaliya oo ku saabsan xidhashada iyo iska bixinta goonnada go'doominta ee "Tilmaanta Farsamada Go'doominta" (Goonka go'doominta waa in gadaal laga furo si loo daboolo dhammaan dharka iyo maqaarka bannaan), laakiin ma jiraan wax tilmaamo iyo qalab, iwm. Tilmaamayaasha la xidhiidha. Gowns go'doonku dib ayaa loo isticmaali karaa ama waa la tuuri karaa iyada oo aan dabool lahayn. Marka la eego qeexida goonnada go'doominta ee "Qeexitaannada Farsamada ee Go'doominta Cisbitaallada", ma jirto wax shuruud ah oo ka hortagga-permeability, iyo gowns go'doominta waxay noqon karaan kuwo aan biyuhu lahayn ama aan biyuhu lahayn.
Halbeeggu wuxuu si cad u sheegayaa in dharka ilaalintu uu leeyahay shaqo joojin dareere ah ( iska caabin biyaha, qoyaanka qoyaanka, caabbinta dhexgalka dhiigga synthetic, caabbinta qoyaanka dusha sare), guryaha ololka iyo guryaha lidka ku ah, waana inay lahaataa iska caabin jabinta xoogga, dhererka nasashada, sifeynta Waxaa jira shuruudo wax ku ool ah.
Dharka qalliinka ee la tuuri karo: Sannadkii 2005, waddankeygu wuxuu soo saaray heerar taxane ah oo la xiriira dharka qalliinka (YY/T0506). Halbeeggani wuxuu la mid yahay heerka Yurub EN13795. Heerarka ayaa leh shuruudo cad cad oo ku saabsan sifooyinka xannibaadda, xoogga, dhexgalka microbial, iyo raaxada alaabta dharka qalliinka.  Dharka qalliinka waa inuu noqdaa mid aan la taaban karin, nadiif ah, hal gabal, oo aan lahayn dabool. Guud ahaan, katiinadaha goonnada qalliinka waa laastiig, taas oo ay fududahay in la xidho oo waxtar leh xidhashada galoofyada gacanta ee nadiifka ah. Looma isticmaalo oo keliya in shaqaalaha caafimaadka laga ilaaliyo wasakhaynta walxaha faafa, laakiin sidoo kale loo isticmaalo in lagu ilaaliyo xaaladda nadiifka ah ee qaybaha bannaan ee hawlgalka.
Marka la eego muuqaalka, dharka ilaalinta ayaa si fiican u kala soocaya godadka go'doominta iyo dharka qalliinka. Dharka qalliinka iyo gownnada go'doominta ma fududa in la kala saaro. Waxaa lagu kala saari karaa iyadoo loo eegayo dhererka dhexda (suunka gownka go'doominta waa in lagu xidhaa dhinaca hore si fudud looga saaro.
Marka laga eego dhinaca shaqada, saddexdu waxay leeyihiin isgoysyo. Shuruudaha loo baahan yahay goonnada qalliinka ee la tuuri karo iyo dharka ilaalinta ayaa aad uga sarreeya kuwa gownnada go'doominta ee la tuuri karo. Kiisaska gowns-karantiilku caadi ahaan loo isticmaalo dhaq-dhaqaaqa bukaan-socodka (sida go'doominta bakteeriyada u adkeysata daawooyinka badan), goonnada qalliinka ee la tuuri karo ayaa noqon kara kuwo la is-dhex-maro, laakiin marka ay tahay in la isticmaalo goonnada qalliinka ee la tuuri karo, laguma beddeli karo gown.
Marka loo eego habka loo gashado ama loo qaado, waxa ay ku kala duwan yihiin goonnada gooni-goosadka ah iyo kuwa qalliinka sida soo socota: (1) Marka aad gashanayso oo iska bixinayso marada gooni-gooska ah, u fiirso dusha nadiifka ah si aad uga fogaato wasakhda, halka goonnada qalliinka ayaa fiiro gaar ah u leh hawlgalka aseptic; (2) Gown-ka gooni-goonida ah Waxaa sameeyay hal qof, oo marada qalliinka waa in uu caawiyaa caawiye; (3) Gownka waxa loo isticmaali karaa marar badan iyada oo aan wasakhayn. Ku dheji aagga u dhigma isticmaalka ka dib, iyo marada qalliinka waa in la nadiifiyaa, jeermiska laga nadiifiyaa oo la isticmaalo ka dib marka la xidho hal mar. Dharka ilaalinta la tuuri karo ayaa caadi ahaan loo isticmaalaa kiliinikada shaybaarada microbiology, waadhka cudurada faafa ee cadaadiska xun, Ebola, hargabka avian, mers iyo cudurada kale ee faafa si shaqaalaha caafimaadka looga ilaaliyo cudurada. Isticmaalka saddexdan ayaa ah tallaabooyin muhiim u ah ka hortagga iyo xakameynta caabuqa isbitaallada, waxayna door muhiim ah ka ciyaaraan ilaalinta bukaannada iyo shaqaalaha caafimaadka.
Hore:Ma xidhatay maaskaro sax ah? Dad badan ayaa inta badan sameeya khaladaadkan!
Xiga:Awoodda wax-soo-saarka galoofyada ee la tuuri karo ayaa loo wareejiyay Shiinaha